३५ लाख रिणमा डुबेका आमाछोराको यस्तो बि*जोग, गरे आत्म*ह*त्या प्रयास/३ करोड नेपालीले हेर्नैपर्ने भिडियो – दैनिक नेपाल न्युज
तेह्रथुमको बिकट गाउमा भएको एउटा गरिब परिवार गरिब भएपनी हासी खुशी चलिरहेको थियो । तर एक्कासि दैबको खेल के भयो भयो । आमालाई एक्कासी रोग देखा पर्यो पाठेघरको क्यान्सर । दिनदिनै पेट दुख्दा पनि सहेरै बसिन ती बुढी आमा पैसा नभएर । त्यही ढिलो भएकै कारण उनको पाठेघर राख्नै नमिल्ने भैसकेको रहेछ । अन्ततः पाठेघर काटेर फाल्नु नै पर्यो । गरिब उनिहरुलाइ जम्मा तीन लाख रिन लाग्यो ।
तीन लाख रिन ठूलो भयो गरिब आमा छोरालाई । दिनदिनै तनाब भयो कसरी तीन लाख तिर्नु भनेर । ती पन्ध्र बर्शिय साना भाइले दुख गर्न थाले ट्याक्टरमा बालुवा ढुङा र ठुलाठुला रुखहरु पनि बोक्न थाले । ट्याक्टरमा दुख गर्दै हिड्दा रिन बोकेका बालक धेरै कमाउने र रिन तिर्ने सपना देख्न थाले र उनले धेरै मेहेनत गरेर ट्याक्टर कुदाउन सिके । कमाउदै आमालाई पैसा दिन थाले, रिन पनि धेरै घटाए तर बिडम्बना मनमा रिन अब तिर्दै छु भनेर झन दुख गर्दै हिडेका साना भाइलाई नसोचेको भयो ।
आफैले कुदाएको ट्याक्टर भिरबाट खसेर ट्याक्टरको चक्काले उनलाई नै किच्यो । उनको खुट्टामाथी तेति ठूलो ट्याक्टरको बोझ पर्यो । करिब दुई घन्टा तीस मिनेटसम्म एइया आथ्था भन्दै कराए, कति चिच्याए । तर त्यो सुनसान भिरमा कोहि नभएकाले उनको आवाज कसैले सुनेन । उनलाई कति दुख्यो होला । कति छटपटाए होला उनी आफुलाइ त्यो ठाउँमा राखेर हेर्नुस त कति पीडा हुन्छ मनमा । धेरैपछि मात्र उनलाइ अर्को ट्याक्टरका साथिहरुले देखे । धेरै समय लगाएर उनलाई त्यहाबाट निकालियो र सिधै धरान घोपा पुर्याइयो । त्यहाँ डाक्टरले हेर्दा हड्डी सबै भाचिएर हेर्नै नसकिने अवस्था थियो । नसा सबै चुडिएको थियो । त्यहा उपचार सम्भव नभएपछि उनलाई काठमाडौ लानु भनेर डाक्टरले भने । रातारात गरेर उनलाई काठमाडौ पुर्याइयो ।
उनलाई आइसियुमा धेरै समय राख्नुपर्यो । लामो समयको उपचार सफल नभएपछि अन्ततः उनको खुट्टा नै काट्नुपर्यो । आमाको उपचारको खर्च जुटाउन दुख गर्दै गरेको केवल पन्ध्र सोर्ह बर्शको बालकलाई अझै ऋणमाथी ऋण थपियो । आमाछोराको उपचार खर्च जोढ्दा करिब पैतिस लाख ऋण पुगेछ । बिचरा गरिब परिवारको बिचल्ली नै भयो न त घर रहयो न त जग्गा नै । घर जग्गा सबै जायजेथा बेच्दा पनि एक छेउसम्म तिर्न पुगेन गरिबको ऋण । ऋण तिर्न नसकेपछी अनि दुबै आमाछोराको यो हालत भएपछी दुखै दुखको सागरमा डुबेका उनिहरुको रुदारुदै दिन अनि रात बित्न थाल्यो । कहाँ जाने के खाने कहाँ बस्ने केही टुङ्गो नै भएन उनिहरुको ।
दुख पर्दा त झन आफन्त सबै तर्किदा रहेछन कसैले साथ दिएन । कसैको साथ नपाएका उनिहरुले फेरि तेह्रथुम जाने साहस गरेनन । आमाछोराले आत्महत्या सम्मको प्रयास गरे । तर एक अर्काको मायाले मर्न दिएन उनिहरुलाइ । कोहि पनि नभएको मान्छेको भगवान हुन्छ भनेझै दमकमा सानो पसल गर्ने एक दिदिले सहयोग गरेर कोठाभाडामा बस्दै आएका आमाछोराको सधै दिन रोएरै बित्छ । दमकमा काम खोज्ने क्रममा उनलाई भाडा माझ्ने काम पनि दिइएन दलित भनेर । अनि आफ्नो थर नै ढाटेर एउटा पसलमा भाडा माझेर कमाएको पैसाले महिनाको कोठाभाडा र खान पनि पुग्दैन त्यति धेरै पैतिस लाख कहाँबाट ल्याएर तिर्नु ? सुपर अनलाइन टिभिका समीर सुबेदिले ती आमालाई रुदै हिडेको देखेर संयोगबस तिनै सहयोग गर्ने ठाउकी मन्जुलाइ नै सोधेछन ।
ती दिदिले आमाछोराको मनै रुवाउने कहानी सुनेपछी थाहै नपाइ आखाभरी आँसु भएछ समिरको । यो दुखलाइ सबै नेपालीमाझ पुर्यायो भने सधै रुदै हिड्ने आमा अनि बिजोक भएको छोराको आखामा अलिकती भएपनी खुशी देखिन्छ कि भनेर पहिलोपल्ट मिडियामा ल्याए । यी आमाछोराको ठाउमा आफुलाइ राख्नुस अनि सोच्नुस त कस्तो हुन्छ ? तल भिडियोमा सबै कुरा देखाइएको छ त्यहा गएर हेर्नुहोला र अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला किनकी तपाईंले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिएको खण्डमा भिडियो हेरेबापत युटुबबाट पैसा आउँछ ।
र त्यो आएको सबै पैसा ती गरिब आमाछोरालाइ दिनेछन समीर सुबेदिले उनले भिडियोमा रुदै वचन दिएका थिए । सकेको सहयोग सबैले गरिदिनुहोस तपाईंको सानो सहयोग पनि यो दुखी परिवारलाई ठूलो हुनेछ ।मन हुदाहुदै पनि सहयोग गर्ने अवस्था सबैको नहुन सक्छ सहयोग गर्न सक्नुहुन्न भने यो भिडियोलाई शियर गरिदिनुहोला । तपाईंको एक शियरले धेरै सहयोगि सम्म पुग्छ यो समाचार अनि भिडियो सहयोगीले यो देखेर सहयोग गर्नुभयो भनेपनि तपाईंले सहयोग गरेको बराबर हुनेछ ।
सहयोग गर्नलाई ९८१४९३०७३६ र ९८२५९०६८६६ मा सम्पर्क गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो सहयोग गरेको विवरण सहितको भिडियो समीर सुबेदीले बनाएर सुपर अनलाइन टि भि मा अपलोड गर्नेछन । यदि आमाको खाता नम्बरमा पैसा जम्मा गरिदिन चाहानुहुन्छ भने सानिमा बैंक खाता नम्बर : ००२०११०९०००३१८४ मा गरिदिनुहोला । समीर सुबेदीसङको करिब ४२ मिनेटसम्म आमाको आँसु रोकिएन अरु झन झन रुदै जानुभयो अन्त्यमा कुराकानी नै रोक्नुपर्यो । आमाले रुदैरुदै आफ्नो जीवन कहानी यसरी सुनाउनु भयो तल भिडियोमा हेर्नुहोला…